1. Loluphi uhlobo lwezixhobo ekufuneka ulisebenzisile? A: kuxhomekeke kwimveliso kunye neempawu ezibonakalayo. Iimveliso ezinokuthi ziqhubeke ngenqindi zinokusebenzisa umatshini wokucheba ngokuzenzekelayo (ngemisebenzi edityanisiweyo), enje ngetape enamacala amabini, iphepha lokusasaza, isibonakalisi esisetyenzisiweyo ...
Standing Ukuqonda isixhobo sokubumba Kukho iindidi ezingaphezu kwe-100 zeemela ngokweekona le blade, ubulukhuni bentsimbi kunye nebhleyi, ingqolowa yebheyi kunye nobuchwephesha bokulungisa ityhubhu kunye nebhleyidi. Uphuhliso kunye nokuveliswa isixhobo ngumngundo isekelwe phezu ukuqonda nzulu prod ...
Ngomhla kaJan 4, isidlo sangokuhlwa sonyaka sasibanjelwe ukubhiyozela unyaka omtsha. Umphathi omkhulu we-CEO wenze le ntetho ebulela igalelo elenziwe ngawo onke amalungu osapho kulo nyaka uphelileyo kwaye wawonga abasebenzi ababalaseleyo. Ngemizamo yabo bonke, siye ukusebenza kakuhle ...
ngomphathi ku 19-05-28
Ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe ku-Matshi 2019, u-Yuebaixiang uthathe inxaxheba kwi-Shenzhen International Die kunye ne-Mold Expro, apho sabonisa khona iimveliso ezichanekileyo ze-Die-cut kunye ne-Cut-Die kubathengi bethu kwaye safumana ukwamkelwa kubo. Ukusuka kwindawo yomboniso walo nyaka, yeyiphi abathengi abajongeka ngayo ...
Auto-Material Ukuzalisa mfanekiso Die, Imaski Rotary Die, Steel Die mfanekiso, Ukufa kweLaser, Inkunkuma-Drop Ukuchitha Rotary Die, Umphezulu Umphezulu mfanekiso Die,